Iplagi yeenkonzo ze-ecw nge-AutoCAD-Geofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-Plugin yeenkonzo ze-ecw nge-AutoCAD
I-ERDAS isandula ukubhengeza iplagin entsha yeAutoCAD evumela ukufikelela kwimifanekiso (ECW kunye neJPEG 2000) ngomgaqo obizwa ngokuba yiECWP.
I-ECW yifomathi enezinto ezininzi ezinokubaluleka, uxinzelelo ngaphandle kokulahleka okukhulu komgangatho, njengomfanekiso weTX we-200 MB unokulinganisa ukuya kwi-8 MB; Iluncedo kakhulu kulawulo lwe desktop kunye neenjongo zokushicilela kwiwebhu.
Kuyaqondwa ukuba ngale plugin, ii-AutoCAD application (i-desktop) inokuqhagamshela kwiinkonzo ze-IWS, ke kuya kulindeleka ukuba iinkampani ezininzi zithathe ithuba lokufikelela kwimifanekiso ngaphandle kokubabiza ngomphathi we-raster ... kwaye kufuneka zisebenzise ubuncwane obuncinci ukusuka PC
Ifumaneka ngohlobo lwe2007, i-2008 kunye ne-2009 kunye ne-AutoCAD Map3D kunye ne-Civil 3D, ukuze uyikhuphele kufuneka uyihambele le dilesi.
kunye nokufunda malunga nokusebenza kunye nokusebenza kwayo, isemina kwi-intanethi (kwi-webinar) iya kubanjwa ngoJuni 25 ukusuka kwi-2008 onokuthi ubhalise kuyo.
Ewe, kubonakala ngathi ayisekho kwikhonkco. Kuya kubakho ukukhangela kwiphepha le-Erdas, ukubona ukuba kusekhona.